ICoca-Cola ilogo esindayo ekuhambeni kwexesha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ICoca-Cola ilogo esindayo ekuhambeni kwexesha kakuhle oko yadalwa khange luphinde lwenzeke utshintsho ibalulekile kokubonakala kwayo kunye nemibala kwaye igqibile. Lo mfanekiso wequmrhu usibonisa ukubaluleka kwe- Umzobo olungileyo kunye nokubaluleka kwayo njengomboniso wenkampani, ingaba yintoni iCoca-Cola ngaphandle kwayo yonke intengiso eyenzileyo? uthanda ungathandi, Uyilo ludlala indima ebalulekileyo kule.
Omnye imbonakalo entsha nekhoyo ngoku yequmrhu emva ngaphezulu kwe Iminyaka eyi-100 yembali loo nto iyiguqulele kwinkampani enembali kodwa incinci kwaye ikho ngoku. Ukubaluleka kweCoca-Cola kulele kwi-logo yayo kuphela kodwa nakwezinye izinto ezininzi kubalulekile.
1 Luhlobo luni lomfanekiso wequmrhu onayo uCoca-Cola?
2 Itshintshe kangakanani ilogo yeCoca-Cola ekuhambeni kwexesha?
3 Kutheni le nto uphawu lusebenza kakuhle?
Luhlobo luni lomfanekiso wequmrhu onayo uCoca-Cola?
Ukusuka kwindawo yokujonga imifanekiso, inkampani yeCoca-Cola yile emelwe ilogo, yiyo loo nto uphawu lusebenzisa kuphela typography ukuzimela. Kule meko, ifonti esetyenziswe nguCoca-Cola kule logo yayiyi I-Spencerian ngesitayile esitshabhisayo esinike ilogo intshukumo kunye nokuchachamba
Xa uyila logo omnye wemithetho esisiseko kukuba le kulula ukukhumbula ukukwazi ukuyidibanisa ngokukhawuleza xa siyibona kwakhona, kunye neCoca-Cola kwenzeka into enomdla kuba ilogo entsonkothileyo ngenxa yazo zonke iinkcukacha zokuchwetheza, kusenzima kakhulu ukukhumbula kuba into yokwazisa kuyakhawuleza okoko umsebenzisi adibanise imilo ngokubanzi yeseti, kule meko aba babini «C» badlala indima ebalulekileyo kulo msebenzi.
Itshintshe kangakanani ilogo yeCoca-Cola ekuhambeni kwexesha?
I-logo yeCoca-Cola inayo itshintshe kancinane ukusukela oko yasekwayo ngaphezu kweminyaka eli-100 eyadlulayo, ibiku 1887 xa usokola uhlengahlengiso oluncinci xa kuthelekiswa nelogo yoqobo eyenziwe ngaphambili, owokuqala u-C unegama elongeziweyo "uphawu lwentengiso" njengophawu lokuba uphawu lwentengiso lubhalisiwe eMelika.
Olunye utshintsho olubalulekileyo nolunomdla kakhulu lelo lonyaka 1890-1891 xa ilogo yamkela ubugcisa be-gothic ngeziphelo ezijikelezayo. Olu tshintsho lokugqibela aluzange luhlale ixesha elide kwiibhotile zoqobo ngelo xesha.
Emva kolu tshintsho olukhulu kwi-logo yeCoca-Cola qala ukwamkela isimbo esaziyo namhlanje Kule mihla kukho utshintsho oluncinci apho sinokubona utshintsho oluthile kodwa sikwazile ukudibanisa ilogo kunye nophawu. Iphakathi 1940 xa ilogo yenza isitayile sakho ngokupheleleyo kungoko ukulawula ukwenza ilogo eya kuthi ibonakalise uphawu iminyaka emininzi.
En los Ngama-50 logo yeCoca-Cola yile isakhelwe kwipilisi ebomvu ebizwa ngokuba yi "fish tail" Kulapha apho yaqala khona dibanisa obomvu kunye nophawuKwenzeka into enye nokusetyenziswa kobume obunemibala ngasemva. Kwi 1969 I-Coca-Cola iphinde ihlengahlengise uphawu lwayo kwaye yongeza into entsha ngokuchasene nemvelaphi yayo ebomvu, le nto intsha yemizobo yi "wave", umgca we-organic ophefumlelwe ngabantu abadumileyo Ibhotile yokuthambisa.
Ubume be-organic banike uphawu u-a amandla amakhulu ukufumana intshukumo engaphezulu ngokusetyenziswa kwezinto ezibonakalayo ezilula kakhulu, kule meko a Umgca we-organic. Le fomu ibizwa ngokuba ngu "wave" yayingu kusetyenziswe amashumi eminyaka kamva kuyilo lwangoku lwegama Apho ibonakalisa ezinye zexabiso lazo ngokusetyenziswa kweefom zomntu (iingalo) ezilawulayo ukuphinda zimile kwakhona kweliza elimhlophe elidumileyo (umgca).
Ngokufika kwe-millennium entsha ngonyaka 2003 Coca Cola lungelelanisa ilogo yakho namaxesha amatsha kwaye ugqiba kwelokuba ayinike "inyani enkulu" ngokuthi Ukusetyenziswa kwemilinganiselo kunye nezithunzi eya kuhamba nomgca omdala omhlophe kunye umgca omtsha otyheli. Olu lutshintsho olubalulekileyo kumfanekiso wophawu lwentengiso kuba ukukwazi ukuziqhelanisa namaxesha amatsha kwakubalulekile kubo, abakufezekisileyo ngaphandle kwengxaki.
Ngokuhamba kwexesha uphawu luya kuqonda utshintsho oluncinci kumfanekiso kunye nokupakishwa kwayo kodwa uhlala ugcina ubunzulu beziqalo zayo. ICoca-Cola ngokungathandabuzekiyo ngumzekelo uyilo, uyilo kunye nomsebenzi obukhali.
Kutheni le nto uphawu lusebenza kakuhle?
Uphawu lweCoca-Cola lusebenza kakuhle kakhulu izinto ezimbini ezisisiseko:
Banemveliso elungileyo (isoda)
Benza uphawu olugqwesileyo kunye nomsebenzi wentengiso.
Ukuba sidibanisa ezi zinto zimbini sifezekisa iziphumo ezonelisayo ngendlela emangalisayo kwinkampani nakumsebenzisi, ndiyonwaba ngalo lonke ixesha ndibona Intengiso yoyilo lweCoca-Cola egcwele intelekelelo.
Un umsebenzi wentengiso ongenasiphako ukusuka kwindawo yokujonga kunye nokusetyenziswa kwe iindlela zokuthengisa ukufikelela kwinani elikhulu labasebenzisi ngokusekwe kwi iimvakalelo neemvakalelo. Iimvakalelo zeCoca-Cola zi into esisiseko kubume bayo njengegamaKuyafana nangombono wosapho kunye nomanyano. KwiCoca-Cola, isiselo sayo besisoloko sinxulunyaniswa nombono Ukugqitywa njengentsapho.
Kule nto 60 indawo Sibona ezinye zeempawu eziphambili zorhwebo ukuba ixesha elide bezizinto ezisisiseko kwintengiso yazo.
Kwiminyaka emininzi Emva kwexesha sinokufumana iindawo ezifanayo esizilungelelanisayo namaxesha ethu apho amaxabiso amelweyo ayafana kodwa aboniswe ngendlela yangoku. Inomdla wokujonga ukuba zenziwa njani iintengiso zeCoca-Cola zangoku se banxibelelana ngakumbi nomdlalo bhanyabhanya kunentengiso.
I-Coca-Cola ngokuqinisekileyo umzekelo kubathandi bentengiso kunye noyilo Ibonakalisa ubuchwephesha kuyo yonke imizobo kunye neembono, kudlalwa ngamaxabiso omelele njengosapho, uthando, ubumbano kwaye, kutsha nje, i-ecology kunye nempilo yomsebenzisi enkosi kumanyathelo afana neCoca-Cola ubomi obungenaswekile okanye njengeCoca -Cola Zero. Ukuba unomdla wentengiso unezinto ezininzi onokuzibona, ufunde kwaye uthathe njengoko Isalathiso seeprojekthi ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » ICoca-Cola ilogo esindayo ekuhambeni kwexesha